ချဲလ်ဆီး ဂန္တဝင် ၂ဦးဟာ သူ့ရဲ့ အိုင်ဒေါတွေ ဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ဟရင်း ၊ ငယ်စဉ်က ချဲလ်ဆီး ပရိသတ် တဦး ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတာ ငြင်းမရကြောင်း ဝန်ခံလာတဲ့ ဆန်ချို - SPORTS MYANMAR
ချဲလ်ဆီး ဂန္တဝင် ၂ဦးဟာ သူ့ရဲ့ အိုင်ဒေါတွေ ဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ဟရင်း ၊ ငယ်စဉ်က ချဲလ်ဆီး ပရိသတ် တဦး ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတာ ငြင်းမရကြောင်း ဝန်ခံလာတဲ့ ဆန်ချို
ယခုနှစ် နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ စျေးကွက်မှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ဒေါ့မွန် အသင်းရဲ့ အသက် ၂၁နှစ် အရွယ် အင်္ဂလန် ကြယ်ပွင့် တောင်ပံ ကစားသမား ဂျေဒင် ဆန်ချို ကို ခေါ်ယူဖို့ အပြင်းအထန် ကြိုးစားနေပြီး ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကပဲ ၂ဦး၂ဖက် အကြား နှုတ်အားဖြင့် သဘောတူညီမှု တချို့ ရခဲ့ပြီလို့ သတင်းထွက်လာခဲ့ပါသေးတယ် ။
ဆန်ချို ဟာ မန်ယူနိုက်တက်ရဲ့ အကြိမ်ကြိမ် ကမ်းလှမ်းမှုကို ရရှိခဲ့ပေမယ့် ၊ အခု တကြိမ်မှသာ နီးစပ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ သို့ပေမယ့် ဒေါ့မွန်ဖက်က မန်ယူနိုက်တက်ရဲ့ ယူရို ၈၅သန်းနဲ့ ကမ်းလှမ်းချက် ကို ပယ်ချထားလို့ ၊ အနည်းဆုံး နောက်ထပ် ယူရိုသန်း ၉၀တန် ကမ်းလှမ်းမှုမျိုး ထပ်လုပ်ဖို့ လိုနေပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီတုန်းကတော့ ဆန်ချိုကို မန်ယူနိုက်တက်နဲ့ အပြိုင် ခေါ်ယူချင်တဲ့ အခြား ပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်သီး ၂သင်း ဖြစ်တဲ့ ချဲလ်ဆီး နဲ့ လီဗာပူးတို့ ရှိခဲ့ပါတယ် ။ သို့ပေမယ့် တောင်ပံ တိုက်စစ် အားဖြည့်ဖို့ဟာ ၄င်းတို့ရဲ့ ပထမ ဦးစားပေး ပစ်မှတ် မဟုတ်ခဲ့လို့ မန်ယူနိုက်တက် အဖို့ ဆန်ချိုကို စိတ်အေးလက်အေး ချဉ်းကပ်လို့ ရနေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
တဖက်မှာ မန်စီးတီး အကယ်ဒမီထွက် ကြယ်ပွင့် ဆန်ချို ဟာ ငယ်စဉ်က လန်ဒန်မြို့ခံ ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ ပရိသတ် တဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၊ ဒီဒီယာ ဒရော့ဘာ ၊ ဖရန့် လမ်းပတ် တို့ဟာ ၄င်း ငယ်စဉ်က အားကျ အတုယူခဲ့ရတဲ့ ဘောလုံး အိုင်ဒေါ ၂ဦး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
မနေ့က Talksport နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဆန်ချို က သူဟာ ငယ်စဉ်က ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ ပရိသတ် တဦး ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ငြင်းမရကြောင်း နဲ့ ဒရော့ဘာ နဲ့ လမ်းပတ် ဟာ ၄င်းရဲ့ အိုင်ဒေါတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့သလို ၊ မန်ယူနိုက်တက် အသင်းနဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ ကောလဟလတွေကိုလည်း စိတ်ထဲ သိပ်မထားကြောင်း ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ် ။
ဆန်ချို က ” ကျွန်တော့ရဲ့ အင်္ဂလန် ဟီးရိုး ? ဖရန့် လမ်းပတ်လို့ပဲ ကျွန်တော် ဖြေရမှာပါ ။ ကျွန်တော် ဟာ ချဲလ်ဆီး အသင်းကို အားပေးပြီး ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ် ဆိုတာကို မငြင်းဆန်လိုပါဘူး ။ အဲ့ဒီတုန်းက ဒီဒီယာ ဒရော့ဘာ နဲ့ ဖရန့် လမ်းပတ် တို့ဟာ ကျွန်တော် အနှစ်သက်ဆုံး ကစားသမားတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ “
” ဖရန့် လမ်းပတ်ရဲ့ ကစားပုံကို အဓိက နှစ်သက်တာပါ ။ သူဟာ တိုက်စစ်ကို အရမ်း လိုက်ပါ ကစားပြီး ၊ ဘောလုံး အထိန်းအသိမ်း အတော်လေး သေသပ် တည်ငြိမ်ပါတယ် ။ အပြောင်းအရွှေ့ သတင်း? ဒီအပေါ်မှာ ကျွန်တော် အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ ။ “
” အပြောင်းအရွှေ့ စျေးကွက် ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ ဒီလို ကောလဟလတွေ ထွက်နေတာ ပုံမှန်ပါပဲ ။ အထူးသဖြင့် ခင်ဗျားဟာ ကိုယ်ကစားနေတဲ့ ကလပ် အသင်းမှာ ခြေစွမ်းပြနေရင်ပေါ့ ။ ဒါဟာ ခင်ဗျားရဲ့ ကွင်းတွင်း ခြေစွမ်းကို ဘယ်လို ထိန်းချုပ်တယ် ဆိုတဲ့ အပေါ်ပဲ မူတည်ပါတယ် ။ “
” ခင်ဗျား ဟာ ကိုယ်လုပ်နေကျ အလုပ်ကိုပဲ ဆက်ပြီး လုပ်နေဖို့ လိုပါတယ် ။ ဒါဆိုရင် ခင်ဗျား အတွက် ဘာပြဿနာမှ ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အဓိက အရာက ကျွန်တော့အဖို့ ဘောလုံး ကစားနေရဖို့ပါပဲ ။ ဒါဟာ ကျွန်တော် လောလောဆယ် အာရုံစိုက်နေတဲ့ အရာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
ဆန်ချို ဟာ လက်ရှိ အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် အသင်းရဲ့ ယူရို ပြိုင်ပွဲ အတွက် နောက်ဆုံး ကစားသမား ၂၆ယောက် စာရင်းမှာ ပါဝင်နေပြီး ၊ တောင်ပံ တိုက်စစ် နေရာမှာ ပုံမှန် ပွဲထွက် ကစားခွင့် ရဖို့ အခြား အသင်းဖော်တွေ ဖြစ်တဲ့ မားကပ်စ် ရက်ရ်ှဖို့ဒ် ၊ ရာဟင်း စတားလင်း ၊ ဂျက်ဂရီးလစ်ရှ် ၊ ဖီးလ်ဖိုဒန် အစရှိတဲ့ ကစားသမားတွေနဲ့ ပြိုင်ဆိုင်ရဖို့ ရ်ှနေပါတယ် ။